U-Nicki Minaj uTyhila ukuba ukhulelwe-Iindaba zeNigeria kunye namabali eGlobal
I-Rave News Digest: UNicki Minaj utyhila uMkhulelwe, iCoronavirus Vaccine Trigger Response, uJude Bellingham + Okungakumbi
NU-icki Minaj utyhila ukuba ukhulelwe ngemifanekiso, Mnumzana Eazi ukumilisela iNgxowa-mali yoMculo ye-Afrika yabadala base-Afrika, isitofu sokugonya i-Oxford coronavirus sibangela ukuphendula komzimba, uJude Bellingham usayina eDortmund. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
NgoLwesihlanu, nge-17 kaJulayi, kwabakho iindaba zokuba umculi ophumelele amabhaso kwezomculo, u-Oluwatosin Ajibade odume ngokuba nguMnumzana Eazi usungula ingxowa-mali ezakuthi ityale imali kwiinkwenkwezi zase-Afrika ezizayo. Umnumzana Eazi uxelele i-CNN ukuba i-Africa Music Fund (AMF) ixabisa i-20 yezigidi zeedola kwaye umtyali mali okhokelayo yi-88mph, inkampani ebonelela ngemali yamashishini ase-Afrika.
1. UNicki Minaj ukwazisa ngokukhulelwa ngemifanekiso emihle
Udubulo lokukhulelwa kukaNicki Minaj
unicki minaj, kwisibhengezo esimangazayo kwi-Instagram yakhe, ngoMvulo kutyhila ukuba ukhulelwe. Le mvumi ayivelanga igama likatata wakhe ongutata kwaye yathumela umfanekiso kwibhasikini, inikezela ngeenwele eziphuzi, yambopha iqhuma lakhe.
Imvumi yonke yayinoncumo lwekhamera kwaye yathwebula umfanekiso isithi, "#Ibakhupheli." UNicki kwathiwa uyathandana UKenneth Petty neengxelo zokuba esi sibini satshata ngasese kodwa uNicki akazange aqinisekise.
UNicki Minaj naye wabelane ngomfanekiso wesibini esazisa abalandeli bakhe ukuba ukhulelwe, lo ngaphandle kwengcaciso. Kwakulenyanga iphelileyo kuphela apho abalandeli beli mvumi bambuza ukuba ulindele umntwana na 'umyeni' wakhe? UKenneth Petty xa wabonakala efihla isisu sakhe ngoshaka wosana kwezinye izifinyezo zokupasa.
Ngomfanekiso wakhe wokugqibela, uNicki uqinisekisa ukuba utshatile njengoko efaka umfanekiso “Uthando. Umtshato. Ukuthwala umntwana. Ukugcwala ngovuyo nangombulelo. Enkosi nonke ngeminqweno emihle. 💛 ”
2. IGhana: Amagosa e-EC abaleka emva kwemipu umlilo, atshisa izithuthuthu kwindawo yokubhalisa eKasoa
Iziko lobhaliso elihlaselweyo
Amagosa eKhomishini yoNyulo aluvale iZiko lokuBhalisela uKrestu kwindawo yase-Awutu Senya East emva kokuba amadoda ephethe umpu ehamba nesaqhwithi kuloo ndawo. Amangqina okuzibonela athi, amadoda aneminyaka elishumi elinesihlanu afika kweli ziko nge-15 kusasa aza azama ukuphosa abanye abafuna ukuvota. Oku kwakhokelela kukungakhathali okubone kuqhushumbe ngemipu kunye nokutshiswa kwezithuthuthu ezintathu.
Okwangoku abaphathi be-NPP, I-Hawa Koomson, kunye ne-NDC yeqela eliphikisayo, Phyllis Naa Koryoo waya kwikomkhulu lamaPolisa eSithili ukuya kuba nentlanganiso kunye nommiselo wesahluko saseKasoa malunga nesi sigameko.
3. UMzantsi Afrika: Iqela likaSodolophu libulala amantombazana amabini akwishumi elivisayo
USodolophu waKwaNongoma Albert Mncwango Ube lusizi kukufa kabuhlungu kwamantombazana amabini akwishumi elivisayo osweleke kwingozi ebandakanya intombazana yakhe ngoLwesine, nge-16 kaJulayi eR66 eWhite City. Ngokwengxelo, amantombazana, Asanda Ngcobo kwaye U-Olona Ndebele usweleke emva kokutsalwa yicandelo losodolophu kangangemitha ezininzi.
Kuqondwe ukuba lo mfo wayevele ewisa usodolophu ekhayeni lakhe kwaNongoma, emantla aKwaZulu-Natali xa kwakusenzeka esi siganeko.
4. I-Coronavirus: Ugonyo lwe-Oxford lubangela ukuphendula komzimba
Ugonyo lwe-coronavirus oluphuhliswe yiDyunivesithi yase-Oxford lubonakala lukhuselekile kwaye lubangela ukuphendula komzimba. Izilingo ezibandakanya abantu abayi-1,077 zibonakalise inaliti ekhokelele kubo benza ii-antibodies kunye nee-T-cell ezinokulwa i-coronavirus.
Iziphumo zithembisa kakhulu, kodwa kusekude kakhulu ukuba bazi ukuba kufanelekile ukukhusela kwaye izilingo ezikhulu ziyaqhubeka.
5. UJude Bellingham: IBorussia Dortmund isayine abadlali beBirmingham City
UJude Bellingham (ekunene) udlale kwinqanaba lolutsha eNgilane
I-Birmingham City yolutsha UYuda Bellingham ugqibe ukuhambisa imidondoshiya yaseJamani iBorussia Dortmund enokugcina ixabisa ngaphezulu kwe- $ 30m. Umdlali ophakathi kweminyaka eli-17 utyikitye isivumelwano sexesha elide neDortmund.
U-Bellingham, ongumdlali omncinci we-Blues, uza kuyishiya iklabhu ye-Championship emva komdlalo wabo wokugqibela wesizini ngoLwesithathu. UDortmund yayilukhetho olukhethwe nguBellingham ngaphambi kweklabhu ezininzi zaseNgilani, kubandakanya iManchester United.
I-Rave News Digest: UNicki Minaj Hints yena ukhulelwe, amaNigeria asusiwe e-UK ngoku eLagos, Ighalo + Okunye
Uhlobo Rave Julayi 20, 2020
Izitayile ze-Bun ezothusayo kufuneka ujonge ngoku